Sɛn Na Bible Betumi Aboa Me?​—Ma Wo Bible Akenkan Nyɛ Anigye | Mmabun Bisa Sɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Alur American Sign Language Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Azerbaijani Baoule Basque Batak (Toba) Belize Kriol Betsimisaraka (Southern) Bicol Bislama Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chavacano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Chiyao Chuvash Cibemba Croatian Czech Dangme Danish Dutch Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fante Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German German Sign Language Greek Greenlandic Guarani Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hindi (Roman) Hmong (White) Hungarian Iban Icelandic Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabuverdianu Kachin Kalanga (Botswana) Kannada Kazakh Kazakh (Arabic) Khakass Kikamba Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Lunda Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Mambwe-Lungu Mapudungun Marathi Mauritian Creole Maya Mingrelian Mongolian Moore Myanmar Nahuatl (Huasteca) Ndebele (Zimbabwe) Nepali Niuean Norwegian Nzema Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Peruvian Sign Language Pidgin (West Africa) Polish Polish Sign Language Pomeranian Portuguese Portuguese (Portugal) Punjabi Punjabi (Shahmukhi) Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Quiche Quichua (Chimborazo) Quichua (Imbabura) Quichua (Tena) Rarotongan Romanian Romany (Macedonia) Romany (Macedonia) Cyrillic Romany (Vlax, Russia) Russian Russian Sign Language Samoan Sango Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Seychelles Creole Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Sunda Swahili Swedish Tagalog Tahitian Talian Tamil Tankarana Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tongan Totonac Tsonga Tswana Turkish Turkmen Twi Tzeltal Tzotzil Udmurt Ukrainian Urdu Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Welsh Yoruba Zapotec (Lachiguiri) Zulu
Audio Baabi a wubetumi atwe nneɛma abɔ atie Sɛn Na Bible No Betumi Aboa Me?​—Ɔfã 2: Mɛyɛ Dɛn Ama Me Bible Akenkan Ayɛ Anigye?
Ɔbabun bi a ne din de Will kaa sɛ, “Sɛ wunnim ɔkwampa a yɛfa so kenkan Bible a, ebetumi ayɛ wo sɛ ne kan yɛ anihaw.”
Wopɛ sɛ wuhu sɛnea wobɛkenkan Bible ama w’ani agye? Nea yɛrebɛka ho asɛm wɔ ha yi bɛboa wo.
Kenkan Kyerɛwnsɛm no te sɛ nea na wowɔ hɔ na asɛm no sii
Fa w’adwene ne wo koma nyinaa di akenkan no akyi. Wubetumi de nyansahyɛ a edidi so yi ayɛ adwuma:
Paw Bible mu asɛm bi a wopɛ sɛ wusua. Wubetumi apaw Bible mu asɛm bi anaa asɛm bi wɔ Nsɛmpa nnan no fã bi. Wopɛ nso a, Bible akenkan a wɔayɛ no sɛ drama a ɛwɔ jw.org. no, wubetumi apaw bi na woabɔ atie.
Kenkan asɛm no. Wopɛ a, wo nko ara wubetumi akenkan. Wubetumi nso ne wo nnamfo anaa w’abusuafo abom akenkan no den. Onipa baako betumi afi ase akan, na sɛ odu baabi na ɛyɛ obi anom asɛm a, na nipa foforo nso akan.
Nyansahyɛ a edidi so yi, sɔ emu baako anaa nea ɛboro saa hwɛ:
Asɛm a worekenkan no, drɔdrɔ ho mfoni. Wopɛ nso a, sɛnea nsɛm bi sisii nnidiso nnidiso no, wubetumi adrɔdrɔ ho mfoni ahorow. Wodrɔ mfoni biara wie a, kyerɛw asɛm bi wɔ ho fa kyerɛkyerɛ nea ɛrekɔ so no mu.
Nea wubetumi ayɛ nso ne sɛ, bere a worekenkan obi a ɔbɔɔ ne bra yiye ho ade no, wubetumi akyerɛw ne suban ne nnwuma pa a ɔyɛe na woakyerɛw nhyira a onya fii emu biara mu no ahyehyɛ ho.
Nea worekenkan no, ma ɛnyɛ te sɛ asɛm bi a asi a woreka ho asɛm. Wubetumi aka no wɔ akwan horow so. Nnipa a asɛm no fa wɔn ho ne wɔn a wɔyɛ asɛm no ho adansefo no, wubetumi “abisabisa wɔn nsɛm.”
Nnipa a worekenkan wɔn ho ade no, sɛ wɔn mu bi sii gyinae a nyansa nnim a, susuw ho hwɛ sɛ, wosii gyinae pa a anka ebewie wɔn sɛn. Sɛ nhwɛso no, sɛnea Petro kaa sɛ onnim Yesu no, susuw ho hwɛ. (Marko 14:66-72) Bere a Petro ho kyeree no no, ɔkwampa bɛn na na anka obetumi afa so ayɛ n’ade?
Sɛ wote nka sɛ wutumi twa nsɛm ho mfoni wɔ w’adwene mu pa ara a, ɛnde wubetumi agyina Bible mu asɛm bi so ahyehyɛ nsɛm bi de ayɛ drama. Fa asuade a yebetumi anya wɔ asɛm no mu ka ho.​—Romafo 15:4.
Bible mu nsɛm no, wubetumi ama ayɛ te sɛ nea na wowɔ bi hɔ na esisii!
Sɛ wususuw nsɛm ho kɔ akyiri a, wubetumi akopue akorade a ahintaw so. Nokwasɛm ne sɛ, ɛtɔ da a, asɛmfua baako anaa mmienu bi pɛ betumi ama woate Bible mu asɛm bi ase yiye.
Sɛ nhwɛso no, fa Mateo 28:7 toto Marko 16:7 ho.
Adɛn nti na Marko de kaa ho sɛ ɛnkyɛ na Yesu ayi ne ho adi akyerɛ n’asuafo no “ne Petro”?
Nea ɛbɛma woahu mmuae no: Nsɛm a esisii no, Marko amfa n’ani anhu bi. Ɛda adi sɛ, ne nsɛm a ɔkyerɛwee no, Petro na ɔka kyerɛɛ no.
Akorade a ahintaw no: Wohwɛ a, adɛn nti na ɛbɛyɛ sɛ Petro koma tɔɔ ne yam bere a ɔtee sɛ Yesu pɛ sɛ ohu no bio no? (Marko 14:66-​72) Dɛn na Yesu yɛe de kyerɛe sɛ ɛnyɛ n’ano kɛkɛ na na ɔde dɔ Petro? Dɛn na wobɛyɛ de asuasua Yesu de akyerɛ sɛ ɛnyɛ w’ano kɛkɛ na wode dɔ afoforo?
Sɛ wokenkan Kyerɛwnsɛm no te sɛ nea wowɔ hɔ bi na nsɛm no sisii, na wususuw nsɛm no ho kɔ akyiri a, wo Bible akenkan bɛyɛ anigye pa ara!
“Ɛtɔ da a, mefa ti baako, na mayɛ mu nhwehwɛmu akosi sɛ mɛte ase. Ɛrekame ayɛ sɛ bere biara a mɛyɛ saa no, mihu biribi foforo a minhuu da anaa m’adwene nkɔɔ so. Ɛba saa a, ɛte sɛ nea me nsa aka akyɛde bi a m’ani nna.”​—Bonnie.
“Misuaa Rut nhoma no, na mede Watchtower Library yɛɛ ho nhwehwɛmu sɛnea ɛbɛyɛ a mɛte ase yiye. Ɛkaa me nko a, anka obiara mfa Watchtower Library nni dwuma. Aboa me ama mahu sɛ Bible akenkan betumi ayɛ anigye pa ara.”​—Timothy.
“Sɛ wo ne nkurɔfo bom kenkan Bible a, ɛyɛ anika kɛkɛ. Obiara fa Bible mu nipa baako a, na wakenkan n’asɛm no te sɛ nea ɔreyɛ drama no. M’ani gye Bible akenkan a wɔayɛ no sɛ drama a ɛwɔ jw.org. no ho. Ɛma Bible mu nsɛm no yɛ te sɛ nea na wowɔ hɔ bi na esisii!”​—Isabel.
Bible Akenkan: Dɛn na Ɛbɛma Ne Kan Ayɛ Dɛ?
Wopɛ sɛ Bible akenkan yɛ wo dɛ a, pɛ Bible a wɔakyerɛ ase kama. Afei fa fon, tablɛt, kɔmputa, ne akwan foforo so yɛ nhwehwɛmu.
Share Share Sɛn Na Bible No Betumi Aboa Me?​—Ɔfã 2: Mɛyɛ Dɛn Ama Me Bible Akenkan Ayɛ Anigye?